Okulungileyo, okubi nokubi kwithuba elingaphantsi kosuku-iGeofumadas
Umzobo wokugqibela wonyana wam ngaphambi kokuba abe neminyaka eli-11 ubudala, uyabajika ngoLwesihlanu. Utsho ukuba Giratina, Jorda noPalkiaAndiyithandi loo nto kodwa ndiyakuthanda amandla; Ndiyathanda ukuba ndiyenze loo nto kwi-10 yam.
... ungayifaka le mdwebo kwiblogi yakho, yenze umlinganiselo wokulandelelana kwi-AdSense kwaye uvumele ukuba loo rag ibe yimi?
Ngokuqinisekileyo, kunye nokudlula umthengisi wezobuchwepheshe.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwezikwinqanaba lesihlanu yobugcisa, isilwanyana, isityalo kunye neeseli zomntu. Amnike amanqaku ali-12 kwali-10, ihlazo ekufuneka lilahliwe ngenxa yokuswela indawo. (Omnye ekungeneni ngumntwana we-7)
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Euroatlas: imephu endala kwifom ye-shp
Post Next Umbukeli weTatukGIS… umbukeli omkhuluOkulandelayo »